निगुरोले स्वास्थ्यमा कस्तो फाइदा पुर्याउछ थाहा पाउनुहोस । | Jastako Tastai Khabar
Home जानकारी निगुरोले स्वास्थ्यमा कस्तो फाइदा पुर्याउछ थाहा पाउनुहोस ।
निगुरोले स्वास्थ्यमा कस्तो फाइदा पुर्याउछ थाहा पाउनुहोस ।
Posted By: Pratima Sapkotaon: २६ श्रावण २०७६, आईतवार १७:५१ In: जानकारी, शिक्षा, स्वास्थ्यTags:
यतिबेला बनजंगलमा च्याउ, निगुरो पाइन्छ । कतिपयले जंगलबाट खोजेरै तरकारीको छाक टार्ने गर्छन् । कतिपयले निगुरो, च्याउ बेचेर पैसाको जोहो पनि गर्छन् । तुलनात्मक रुपमा पहाडको जंगलमा पाइने निगुरो बढी स्वादिलो हुन्छ ।
निगुरोलाई कतिपय ठाउँमा न्युरो वा निहुरो पनि भनिन्छ । तराईमा हरियो निगुरो बढी रुचाइन्छ भने पहाडमा कालो निगुरो यतिबेलाको मौसमी सागसब्जी हुन् । बनजंगलमा आफै उम्रने भएकाले यसमा कुनै रासयनिक मल वा विषादी प्रयोग हुँदैन । अर्थात यो पूर्णत जैविक हुन्छ ।
निगुरो तरकारीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । नेपालीको सायदै यस्तो भान्सा होला, जहाँ निगुरो पाकेको छैन । वर्षायाम लागेसँगै कतिले बनजंगलबाट खोजेर र कतिले बजारबाट किनेर निगुरो पकाउने गर्छन् ।
कति पोषिलो ?
निगुरो खानुको फाइदै फाइदा छन् । आफै बनजंगलमा गएर खोज्ने हो भने भान्साको खर्च कटौती हुने भयो । बनजंगलमा उम्रिएका हुनाले यो जैविक र मौसमी तरकारी पनि हो । पोषणविद्हरुले निगुरो पौष्टिकताले भरिपूर्ण रहेको बताउने गर्छन् ।
के हुन्छ त निगुरोमा ?
पोषणविद्हरु भन्छन्, ‘यसमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन ए लगायतका पोषकतत्व पाइन्छ ।’ बालबालिका र गर्भवती महिलालाई त निगुरो अरु बढी लाभदायक छ ।
निगुरो जस्तै देखिने सबै वनस्पति खान लायक भने हुँदैन । कतिपय निगुरो जस्तै देखिने वनस्पति विषाक्त हुन्छ । निगुरोको तरकारी टिपेर खाँदा कतिपय विरामी परेको खबर पनि बारम्बार आउने गर्छ । त्यसैले आफुले चिनेको अवस्थामा मात्र निगुरो खोज्ने, टिप्ने वा किन्ने गर्नुपर्छ ।
केही रमाइल प्रश्नहरु र त्यसको प्रतिक्रिया पुरा भिडियो हेर्नुहोस ।
समुन्द्री छालमा डुबेर कतारमा एक नेपालीको मृत्यु